Ubuxoki be-Amphiboly - Ukungabikho kobuxoki kubuxoki beGraam Defects
Ukungahambi kakuhle kobuxoki ngenxa yoLungiso lwegrama
Inkcazo yobuxoki be-Amphiboly
Igama elithi amphiboly livela kwi-Greek ampho , elithetha "kabini" okanye "kumacala omabini." Le ngcambu, ngokucacileyo ngokwaneleyo, isondelelene kakhulu nehlabathi lesiNgesi.
Esikhundleni sokusebenzisa igama elifanayo kunye neentsingiselo ezininzi, njenge- Fallacy of Equivocation , u-Fallacy of Amphiboly kuquka ukusetyenziswa kwezivakalisi ezinokuthi zichazwe ngeendlela ezininzi kunye nokulungiswa okulinganayo ngenxa yesiphene esithile kwisigrama, isakhiwo sesigwebo, kunye neziphumlisi okanye zombini.
Imizekelo kunye neNgxoxo malunga nobuxoki be-Amphiboly
Ngokuqhelekileyo, isizathu sokuba oku kubonakala kubangelwa kukusetyenziswa kolwimi olungenakulungileyo okanye oluphosakeleyo, njengalo mzekelo:
1. Ngobusuku busuku ndabamba umqhubi kwiipasjama zam.
Ingaba loo mntu wayephethe ama-pajama xa abamba umqhubi okanye ngaba ngumqhubi ozama ukuba ii-pajamas? Ukuthetha ngokukhawuleza, # 1 ayikho into ekhohlakeleyo kuba ayiyiyo ingxabano; kuba kuphela into yokuba umntu uzama ukudala ingxabano esekelwe kuyo:
2. Ngobusuku busuku ndabamba umqhubi kwiipasjama zam. Ngoko ke, kubalulekile ukugcina iipajama zivalelwe ngokukhuselekileyo apho kungekho mntu angazifumana khona.
Ubugqwetha bubonakala ngakumbi xa izigqibo ezingenangqondo zivela kwizinto ezingahambi kakuhle. Ngokuqhelekileyo, ezi mpazamo azifumaneki kwiingqinisiso zangempela. Kunoko, zifumaneka kwiziphakamiso okanye iingxelo:
3. Izazi ze-anthropologists zaya kwindawo ekude kwaye zathatha iifoto zabasetyhini abathile bezabelo, kodwa azizange ziphuhliswe. (ukusuka kuMarilyn vos Savant)
Akucaci nokuba ingaba ibinzana eliguquguqukileyo "alizange liphuhliswe" libhekisela kwiifoto okanye ngabafazi.
Uyakwazi ukuhlangabezana nale nto isetyenziswe ngamabomu ngenjongo ehlekisayo, umzekelo kule nkcazo "yeChurch Bulletin Blunders" evela kwi-imeyile ekuthunyelwa rhoqo ngeenxa zonke:
4. Ungavumeli ukukhathazeka kukubulale - vumela iSonto lincede.
5. Ezi-8 ezambatho zambatho zifunekayo, ngenxa yokongezwa kwamalungu amatsha amatsha kunye nokutshabalalisa abanye abantu abadala.
6. Kwabo banabantwana kwaye abazi, sinemibhede ephantsi.
7. UBarbara uhlala esibhedlele kwaye ufuna abaxhasi bamagazi ukuba baphelelwe igazi. Kwakhona unenkathazo yokulala kwaye ucela amateyipu eentshumayelo zikaPastor Jack.
Amphiboly kunye neArguments
Akukho zihlandlo ezininzi apho umntu angabonakalisa ngamabomu ukungenakwenzeka kwezi ngxabano zabo. Oku kunokwenzeka, nangona kunjalo, xa isitatimende somnye umntu esichazayo sichazwa ngokucacileyo, kwaye umphikisi uyaqhubeka nokufumana izigqibo ezichanekileyo ngokusekelwe kuloo nto ingacacisiwe.
Yintoni ebangela ukuba ukungatshintshwanga oku kuguquke ukuba yi-Fallacy ye-Amphiboly kukuba ukungabonakali kuvela kwimiba ethile yegrammatic okanye iziphumlisi kunokuba igama elithigama elingacacileyo.
8. UJohn watshela uHenry ukuba wenze iphutha. Kulandela ukuba uYohane unenkalipho yokuvuma iimpazamo zakhe. (ukusuka eHurley)
Ukutshintsha okungaqondakaliyo kunokubonakala kunzima ukuba kuthathe ngokungathí sina, kodwa kuthathwa ngokungathí sina xa iziphumo zibi kakhulu - njengomzekelo izivumelwano kunye nokuthanda. Ukuba amaxwebhu anjalo anayo nayiphi na igrammar okanye iimpawu zokubhala iimpawu ezikhokelela ekuchazeni oko kunceda umntu, kubhetele olufanelekileyo lokuba bayawuphishekela.
Icandelo eliqhelekileyo le, nangona kunjalo, xa lisetyenziselwa ukuba abaphulaphuli abahlukeneyo bakwazi ukuphuma kuyo nantoni na ayifunayo - isicatshulwa esingaqhelekanga kwezopolitiko:
9. Ndichasene neerhafu ezityhutyha ukukhula koqoqosho.
Nguwuphi na umviwa ozama ukuthetha?
Ingaba uyayichasa zonke iirhafu kuba ziya kuphuhlisa ukukhula koqoqosho? Okanye ingaba yindawo kuphela kwiirhafu ezinomphumela wokunciphisa ukukhula koqoqosho? Abanye abantu baya kubona enye, kwaye abanye baya kubona enye, kuxhomekeke kubandlululo kunye nama-ajenda. Ngaloo ndlela, sinomzekelo we-amphiboly apha.
Amphiboly kunye nee-Oracles
Enye indawo apho i-amphiboly ibonakala khona kunye neemeko kunye nezibikezelo ze-psychic. Ama-Oracles okanye ama-oracular figures adume kakhulu ngokunikela izibikezelo ezingenangqiqo ezingachazwa emva kokuba iziganeko zinyani. Ukucacisa okungaqondakaliyo kunye nokungabonakaliyo kukuba, kuya kubakho ukuzaliseka, ngokuqinisekileyo ukuqinisekisile amandla esifo sengqondo okanye i-oracle.
UShakespeare wasebenzisa oku ngaphezu kweyodwa kwimidlalo yakhe:
10. UDuke uhlala ubomi uHenry oya kuthulisa. (Henry VI, Icandelo II; Umthetho 1, Isiqendu 4)
11. Yiba negazi, nesibindi, kwaye uzimisele; uhlekise ukugculela amandla omntu, kuba akukho mfazi ozelweyo oya kumlimaza uMacbeth. (Macbeth; uMthetho 4, Isiqendu 1)
Zombini kwezi zibikezelo ziyinto engabonakaliyo. Eyokuqala, akucaci ukuba kukho umntu onguDke Henry oya kuthulisa, okanye ukuba kukho umntu oza kuba ngumphathi oza kubamba uHenry. Oku kungabonakali kubangelwa igrama. Umzekelo wesibini ngumphumo wesigama esichazamisayo: Utshaba lukaMacbeth lukaMacduff lwaluzelwe ngecandelo lamaKesari - "lanyuka ngokungenasiphelo kwisibeleko sikanina" - kwaye ke "kwakungowona mfazi ozelweyo" ngendlela eqhelekileyo.
Ukudideka okunjalo akukhawulelwanga kwintlandlolo: umzekelo oqhelekileyo wale ngqiqo uvela kwiincwadi zikaHerodotus malunga noKumkani Croesus waseLydia. UCroesus wayesaba amandla okukhula kolawulo lwamaPersi waza wabuza amazwi amaninzi into awayeyenzayo kwaye ukuba ufanele ahambe ngokumelene noKumkani uKoresi. I- Oracle yaseDelphi ichazwa ukuba iphendule:
11. ... ukuba ukuba wayekhokela umkhosi ngokumelene namaPersi, uya kutshabalalisa umbuso omkhulu.
Ukuqwalasela oku kuba yiindaba ezilungileyo, uKroesus ukhokela imikhosi yakhe ekulweni. Waphulukana. Ukuba ukhangele ngokukhawuleza ukubikezela, uya kuqaphela ukuba akucaci ukuba yiphi ubukhosi obuya kubhujiswa. UHerodotus uthi xa uCroesus ehlakaniphile, wayeyabuyisela umbuzo ekubuza ukuba yiyiphi i-oracle.
Xa kunikezelwa ubungqina obungenangqondo, abantu bathambekele ekukholweni naluphi na ukuchazwa okulungileyo kakhulu kwinto abayifunayo nantoni na. Abantu abanokungafihlisi baya kukholelwa ukuba intsingiselo engathembekiyo, ngelixa abantu abanomdla baya kukholelwa intsingiselo ebalulekileyo.
Iikholeji zeNASCAR zoLwandle olude kakhulu
Omnye okanye oothixo abaninzi: iintlobo ze-Theism
Amasiko e-Halloween eFransi
I-Louisiana Tech University Admissions
Ezilishumi eziLungileyo zeMpawu eziPhezulu
Indlela yokwakha isicwangciso esiphumeleleyo sokuphucula ootitshala
I-Tarot Suit of Cups
Ukuhlolisisa imibala kunye nemibala yemibala yesikhumba
"Hayi, je ris de me see" Iingoma kunye neNguqulelo